🥇 ▷ Huawei Nova 5T wuxuu la yimid Kirin 980 iyo 8 GB oo RAM ah ✅
Huawei Nova 5T wuxuu la yimid Kirin 980 iyo 8 GB oo RAM ah
Huawei Nova 5T waa rasmi, asal ahaanna waa nooc caalami ah oo ah Mudane 20, oo toddobaadkan laga sii daayay dalka Malaysiya. Nova 5T u imanayaa inuu ku biiro tirada telefoonka Huawei ee Taxanaha Nova, taas oo ay mar hore qayb ka yihiin Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i iyo Nova 5i Pro. Qalabkan oo dhan waxaa la sameeyay muddo 3 bilood gudahood ah, taas oo ina tusaysa istiraatiijiyadda qallafsan ee lagu xakameynayo suuqa iyada oo la adeegsanayo xulashooyin badan, sida Samsung ay ku sameyneysay khadkeeda ‘Galaxy A iyo M’ iyo sidoo kale noocyo kale oo caan ah. Waan ogaan doonaa qaybaha ugu muhiimsan ee aaladda.
Tilmaamaha Huawei Nova 5T
Waan ogaan doonnaa Tilmaamaha Huawei Nova 5T:
Shaashadda iyo Naqshadeynta
Naqshadeynta Nova 5T Waa qaali, oo leh quraarad midabeysan oo abuureysa fikradaha iftiinka. The Astaanta “Nova” xagga hoose waa sheeko cusub oo loogu talagalay Huawei Taasi lama socon karo. Qaybta kale ee naqshada ayaa ah nidaamka afarta-qol, kaas oo si toos ah u waafajinaya saddex dareemayaal iyo tooshka tooska ah ee isla mowjadda, halka dareemaha ‘macro’ uu goor dambe u yahay moduleka. Xarkaha geesku waa xargaha birta xarrago leh oo khafiifka ah iyo qalabka sawirka faraha ayaa ah mid dambe, dhinaca midigta ah.
Dhanka shaashadda, xarkaha waa cidhiidhiya iyo muuqaalka kore ee bidix ayaa loo doortay inuu ku beddelo xiisada. Dhammaan dhinacyadaasi waxay gaaraan a 91.7% saamiga jirka ee shaashadda, qiimo aad u fiican. Oo haddii aan u tagno faahfaahinta farsamada ee shaashadda sidoo kale waa inaad ku qanacdaa, a Nooca IPS LCD ee leh xalka HD + buuxa 2340 × 1080 pixels iyo hal 6.26 inji inji. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad gaarto a 412 Cufnaanta piPP PiP. Mobilku wuxuu leeyahay astaan ​​khafiif ah, oo ah 7.87 mm wuxuuna ku yimaadaa midab guduudan, madow iyo buluug ah.
Huawei Nova 5T wuxuu la imanayaa 6.26-inch FHD + shaashad ah iyo seddex midab oo lagu soo bandhigo
Xusuusta, processor iyo nidaamka hawlgalka
Terminalka cusub ee Taxanaha Nova wuxuu helay chipset-ka awood badan ee Hisilicon Kirin 980 oo ay weheliso kaararka garaafka Mali G76 MP10 720MHz. Tani waa war weyn oo waxaan filan karnaa in taleefanka moobaylka uu ku dhaqmo tusaale fiican nooc kasta oo nashaadaad ah. Diidmada Nova 5T xusuusta, qalabku keenayaa 8 GB oo RAM ah oo leh 128 GB oo ah nooca UFS 2.1 nooca ROM. Haa, Huawei Waxaad dooratay inaad ka booddo booska microSD. Nidaamka hawlgalka ee la socda qalabkan awoodda badan ayaa ah kan hadda socda Android 9.0 Pie hoos u dhigid EMUI 9.1 GUI.
The Huawei Nova 5T batari leeyahay labis 3750 mAh awoodda, ku filan in lagu xoojiyo isticmaalka tikniyoolajiyadda Huawei SuperCharge 22.5 W. Ma aaminsani inaan dhibaato ku qabno is-xukun madax-bannaan.
Nidaamka sawir ee moobiilkan cusub ayaa sidoo kale la mid ah. The camera ugu weyn ee Huawei Nova 5T Waa nidaam afar geesood ah oo leh astaamo aad u xoog badan iyo wax qabad sarreeya. Waxay ahayd wax aan ka yarayn, ilaa Huawei Isagu wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soosaare taleefanka dareemayaasha 48MP iyo kamarad 3D ah (Huawei Honor View 20). Ugu Nova 5T waxaan leenahay dareemayaal 16MP (xagal ballaadhan) + 48MP (Sony IMX 586 dareemayaasha koowaad) + 2MP (bokeh) + 2MP (macro, sawiro dhow-dhaw oo kaliya 4 cm ka fog), tan midige midigta ah ee dareemaha bokeh.
Aagga howlaha waxaan leenahay AI teknolojiyadda AI, Super Night mode (sawirka habeenkii), muuqaalka sawirka, PDAF wuxuu diiradda saarayaa, isbarbar dhig ku saabsan, teknoolojiyadda EIS ee xasilinta fiidiyowga, tikniyoolajiyadda AIS ee xasilinta muuqaalka, qaabka Ultra Clarity (xallinta muuqaalka sare) iyo HDR otomaatig ah. Duubista fiidiyowga waxaa lagu sameeyaa xalka ugu badan ee 4K ee 30fps. Iyo sida kamarada hore, waxa jira dareemayaal gaar ah oo ah 32 Xildhibaan iskii tayo sare leh.
Waxyaabaha isku xirnaanta ayaa hadda ah, oo leh 4G taageero, dual band ac wifi, Bluetooth 5.0, iskuxirka NFC iyo GPS navigation, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo iyo QZSS. Waxaan leenahay USB Type C 2.0 deked, Dual SIM booska, laakiin la’aantii 3,5 mm jaakada maqalka ah. Dareemayaasha dhexdooda waxaa ka mid ah iftiin, cirro, isku-wareega, u-dhowaanta iyo culayska. Waxaan horey u soo sheegnay in qalabka sawirka faraha uu yahay mid dambe, dhinaca midigta ah ee moobaylka.
Huawei Nova 5T waxay keenaysaa Kirin 980 iyo kamarad quad ah oo leh 48 MP
Qiimaha Huawei Nova 5T
Sida loogu Huawei Nova 5T qiimaha, Mobilada waxaa loo soo bandhigi doonaa iib marka ugu horeysa Malaysia laga bilaabo Sebtember 7 oo u dhigma $ 379, qiyaastii 345 euro bedelka.
Gunaanadka iyo fikradaha ku saabsan Huawei Nova 5T
Cusub Huawei Nova 5T Waa taleefan casri ah oo heer sare ah kaasoo la jaan qaadaya isbeddelada hadda socda ee ku boodista booska micro SD iyo maqalka codka. Badbaadinta IP68 iyo dallacsiinta bilaa wireless ayaa sidoo kale la seegayaa. Inta soo hartay waxaan haysanaa moobiil leh tilmaamo cajiib ah iyo heer aad u wanaagsan, oo ay kujirto qalab heer sare ah, shaashad aad u fiican, oo si fiican iskuxiran iyo naqshad qurux badan. Dhamaan qiimaha qiimaha dhexdhexaadka caadiga ah…
Bogga rasmiga ah ee Huawei gudaha Spain.
Soo galitaanka Huawei Nova 5T wuxuu la imanayaa Kirin 980 iyo 8 GB oo RAM ah oo markii ugu horreysay lagu daabacay Planet Red.